အခမဲ့ပြည့်တန်ဆာရုံ ဖြစ်လာတဲ့မြန်မာပြည်မှ တစ်ချို့သော မိန်းကလေးများ အကြောင်း – Alanzayar
အခမဲ့ပြည့်တန်ဆာရုံ ဖြစ်လာတဲ့မြန်မာပြည်မှ တစ်ချို့သော မိန်းကလေးများ အကြောင်း
မြန်​မာနိူင်​ငံဆိုတာ ယဉ်​​ကျေးမှူ့အရာမှာ ကမ္ဘာက အသိအမှတ်​ပြုထားရတာ မြန်​မာအမျိုးသမီးတို့ရဲ့ ဂုဏ်​ကျက်​​သ​ရေ မြန်​မာ့အိ​နြေ္ဒ ၊ မြန်​မာ့ယဉ်​​ကျေးမှူ့ဟန်​ပန်​​တွေက မြန်​မာအမျိုးသမီး​တော်​​တော်​များများ​ကြောင့်​ ပျက်​ဆီးခဲ့ရတယ်​(မြန်​မာ့ယဉ်​​ကျေးမှူ့နဲ့အညီ​နေထိုင်​တဲ့ မိန်းက​လေးအချို့​တော့ရှိပါတယ်​)
ဟိုးအရင်​တုန်းက ​ဟောလိဝုဒ်​ဇာတ်​ကားရိုက်​ဖို့ မြန်​မာမင်းသမီးကို ငှါးတဲ့အခါ ဇာတ်​ကားတစ်​ခုလုံးမှာမြန်​မာဝတ်​စုံပဲဝတ်​ပြသွားပီး မြန်​မာ့ဂုဏ်​ကျက်​သ​ရေကိုကမ္ဘာ့အလယ်​မှာ ချပြသွားခဲ့တဲ့အဖြစ်​​တွေ ဒါ​တွေဟာ မြန်​မာ့ယဉ်​​ကျေးမှူ့ကိုထိန်းသိမ်းပြသွားတာ​တွေ
ဒီ​နေ့​ခေတ်​မှာ​တော့….Facebook မှာ like တစ်​ခု ရဖို့အ​ရေး…..ရှိသမျှပစ္စည်း​တွေ အကုန်​​ဖော်​ပြ​နေကြတဲ့
မြန်​မာမိန်း​က​လေး ​တွေများလာတယ်​……သူတို့ပိုစ့်​​တွေရဲ့ comment ​တွေကြည့်​လိုက်​ရင်​ ​အယုတ္တအနတ္တစုံလင်​​နေ​အောင်​ဆဲဆို​နေကြတဲ့အဆဲ comment ​တွေကို အဟုတ်​မှတ်​ပီးသာယာ​နေတယ်​…
​ခေတ်​ဆန်​ပီး​ရှိသမျှ​ဖော်​ပြ​နေမှ ဝိုင်းပြစ်​မှားခံ​နေရတဲ့Facebook နာမည်​ကြီးတစ်​​ယောက်​ဖြစ်​ချင်​​နေတာလား ဒီလိုမိန်းက​လေးမျိုး​တွေက အပြင်သွားလာတဲ့အခါ​ပတ်​ဝန်းကျင်​မှာ​ရော လုံခြုံမှူ့ရှိလိမ့်​မယ်​ထင်​ပါသလား
ကွယ်​ရာက​လေ ပစ်​မှားဖို့ပြစ်​မှားဖို့​ချောင်း​နေတဲ့ ပုရိဿ​ယောကျာ်​သား​တွေ ဒုနဲ့​ဒေး ရှ်ိ​နေတယ်​…..
မြန်​မာဆန်​ဆန်​ ရိုးရိုးယဉ်​ယဉ်​​လေး​နေတဲ့ မိန်းက​လေးတစ်​​ယောက်​နဲ့ ရှိသမျှအကုန်​​ဖော်​ ​ခပ်​​ဟော့​ဟော့​နေတဲ့ မိန်းက​လေးတစ်​​ယောက်​ဘယ်​ဟာကပိုပြီးကျက်​သ​ရေရှိတယ်​ထင်​ပါသလဲ….?
ဒီလိုခပ်​​ဟော့​ဟော့​​ ရှိသမျှအကုန်​​ဖော်​ပြ​​နေတဲ့မိန်းက​လေးတိုင်းဟာ…မိ​ကောင်းဖခင်​သားသမီးမဟုတ်​ဘူးလို့မ​ပြောလို​ပေမယ့်​…..ဆိုဆုံးမမှူ့ရှိတဲ့မိဘတိုင်းရဲ့ သားသမီးတိုင်းဟာ ဒီလိုမဟူတ်​ဘူးဆိုတာ​တော့​သေချာပါတယ်​…..
မိမိတစ်​​ယောက်​အတွက်​​ကြောင့်​ မြန်​မာ့ဂုဏ်​ကျက်​သ​ရေမတက်​ချင်​​နေပါ​စေ……ဂုဏ်​ကျက်​သ​ရေ​တော့ မညိုးနွမ်း​ပါ​စေနဲ့
အခု​ခေတ်​က ​ယောကျာ်း​လေး​တွေက လုံလုံခြုံခြုံဝတ်​​နေပီး မိန်းက​လေး​တွေက ရှိသမျှအကုန်​​ဖော်​ပြီးမျက်​စိအဟာရ ​ကျွေးတဲ့​ခေတ်​​
အခြားနိုင်​ငံက မင်းသား ၊ အဆို​တော်​လာရင်​ မိန်းက​လေး​တွေကထိပ်​ဆုံးကသွားပီး သဲသဲလှူပ် ငမ်းငမ်းတက်​ဖြစ်​​နေပီး
​ယောကျာ်း​လေး​တွေက ကမ္ဘ္ဘာကျော်​အမျိုးသမီးလာတာ​တောင်​မသိသလို​အေး​ဆေး​နေတဲ့ ကျုပ်​တို့မြန်​မာနိူင်​ငံ​ခေတ်​
(မဟုတ်​ဘူးမငြင်းနဲ့ EXO အဖွဲ့လာတုန်းက ​လေဆိပ်​မှာ​သောက်​ရှက်​မရှိ အုံလိုက်​ကျင်းလိုက်​ သွားငိုပြတဲ့ မိန်းက​လေးထုကြီးနဲ့ ကမာ ကျော်​ DJ Soda လာတာ​တောင်​ ဘာအသံမှမထွက်​တဲ့​ယောကျာ်း​လေး​​တွေ အဖြစ်​ကိုကြည့်​သိသာတယ်​)
​ခေတ်​နဲ့အညီ​နေတာ မ​ပြောလို​ပေမယ့်​ ​ဟော့လွန်းလာရင်​မ​ကောင်းပါဘူး
ဒီလိုပိုစ့်​ကို​ရေးရလို့ ” သူတို့ပစ္စည်းနဲ့သူတို့​ဖော်​တာ မင်းနဲ့ဘာဆိုင်​သလဲ..?” ​မေးမည့်​သူများအတွက်​ တစ်​ခါထဲ​ဖြေ​ပေးမယ်​….
ဒါဟာ မြန်​မာပြည်​….ကျ​နော်ကမြန်​မာနိူင်​ငံသား…ကျ​နော့်​ နိူင်​ငံကျ​နော့်​ယဉ်​​ကျေးမှူ့အတွက် ​​ကျ​နော်​​ပြောဆို​ဝေဖန်​ခွင့်​ရှိတယ်​……
​သေချာတယ်​….ကျ​နော်​တို့မြန်​မာပြည်​ရဲ့ ယဉ်​​ကျေးမှူ့ဟာအဲ့လိုမိန်းက​လေး​တွေ​ကြောင့်​ ​နောက်​ဆယ်​စုနှစ်​တစ်​ခုစာဆိုရင်​ယဉ်​​ကျေးမှူ့ဟာ လက်​ချိုး​ရေလို့ရ​နေ​လောက်​ပီ…..
မိန်းက​လေး​တွေကို ​ပြောချင်​တာက​တော့ ကိုယ့်​​ရဲ့အ​နေအထိုင်အပြုအမူအ​ကြောင့်​ အိမ်​ကမိဘ….မြန်​မာပြည်​ရဲ့ယဉ်​​ကျေးမှူ
မွနျ​မာနိူငျ​ငံဆိုတာ ယဉျ​​ကြေးမှူ့အရာမှာ ကမ်ဘာက အသိအမှတျ​ပွုထားရတာ မွနျ​မာအမြိုးသမီးတို့ရဲ့ ဂုဏျ​ကကျြ​​သ​ရေ မွနျ​မာ့အိ​န်ဒွေ ၊ မွနျ​မာ့ယဉျ​​ကြေးမှူ့ဟနျ​ပနျ​​တှကေ မွနျ​မာအမြိုးသမီး​တျော​​တျော​မြားမြား​ကွောငျ့​ ပကျြ​ဆီးခဲ့ရတယျ​(မွနျ​မာ့ယဉျ​​ကြေးမှူ့နဲ့အညီ​နထေိုငျ​တဲ့ မိနျးက​လေးအခြို့​တော့ရှိပါတယျ​)
ဟိုးအရငျ​တုနျးက ​ဟောလိဝုဒျ​ဇာတျ​ကားရိုကျ​ဖို့ မွနျ​မာမငျးသမီးကို ငှါးတဲ့အခါ ဇာတျ​ကားတဈ​ခုလုံးမှာမွနျ​မာဝတျ​စုံပဲဝတျ​ပွသှားပီး မွနျ​မာ့ဂုဏျ​ကကျြ​သ​ရကေိုကမ္ဘာ့အလယျ​မှာ ခပြွသှားခဲ့တဲ့အဖွဈ​​တှေ ဒါ​တှဟော မွနျ​မာ့ယဉျ​​ကြေးမှူ့ကိုထိနျးသိမျးပွသှားတာ​တှေ
ဒီ​နေ့​ခတျေ​မှာ​တော့….Facebook မှာ like တဈ​ခု ရဖို့အ​ရေး…..ရှိသမြှပစ်စညျး​တှေ အကုနျ​​ဖျော​ပွ​နကွေတဲ့
မွနျ​မာမိနျး​က​လေး ​တှမြေားလာတယျ​……သူတို့ပိုဈ့​​တှရေဲ့ comment ​တှကွေညျ့​လိုကျ​ရငျ​ ​အယုတ်တအနတ်တစုံလငျ​​နေ​အောငျ​ဆဲဆို​နကွေတဲ့အဆဲ comment ​တှေကို အဟုတျ​မှတျ​ပီးသာယာ​နတေယျ​…
​ခတျေ​ဆနျ​ပီး​ရှိသမြှ​ဖျော​ပွ​နမှေ ဝိုငျးပွဈ​မှားခံ​နရေတဲ့Facebook နာမညျ​ကွီးတဈ​​ယောကျ​ဖွဈ​ခငျြ​​နတောလား ဒီလိုမိနျးက​လေးမြိုး​တှကေ အပွငျသှားလာတဲ့အခါ​ပတျ​ဝနျးကငျြ​မှာ​ရော လုံခွုံမှူ့ရှိလိမျ့​မယျ​ထငျ​ပါသလား
ကှယျ​ရာက​လေ ပဈ​မှားဖို့ပွဈ​မှားဖို့​ခြောငျး​နတေဲ့ ပုရိဿ​ယောကျြာ​သား​တှေ ဒုနဲ့​ဒေး ရျှိ​နတေယျ​…..
မွနျ​မာဆနျ​ဆနျ​ ရိုးရိုးယဉျ​ယဉျ​​လေး​နတေဲ့ မိနျးက​လေးတဈ​​ယောကျ​နဲ့ ရှိသမြှအကုနျ​​ဖျော​ ​ခပျ​​ဟော့​ဟော့​နတေဲ့ မိနျးက​လေးတဈ​​ယောကျ​ဘယျ​ဟာကပိုပွီးကကျြ​သ​ရရှေိတယျ​ထငျ​ပါသလဲ….?
ဒီလိုခပျ​​ဟော့​ဟော့​​ ရှိသမြှအကုနျ​​ဖျော​ပွ​​နတေဲ့မိနျးက​လေးတိုငျးဟာ…မိ​ကောငျးဖခငျ​သားသမီးမဟုတျ​ဘူးလို့မ​ပွောလို​ပမေယျ့​…..ဆိုဆုံးမမှူ့ရှိတဲ့မိဘတိုငျးရဲ့ သားသမီးတိုငျးဟာ ဒီလိုမဟူတျ​ဘူးဆိုတာ​တော့​သခြောပါတယျ​…..
မိမိတဈ​​ယောကျ​အတှကျ​​ကွောငျ့​ မွနျ​မာ့ဂုဏျ​ကကျြ​သ​ရမေတကျ​ခငျြ​​နပေါ​စေ……ဂုဏျ​ကကျြ​သ​ရေ​တော့ မညိုးနှမျး​ပါ​စနေဲ့
အခု​ခတျေ​က ​ယောကျြား​လေး​တှကေ လုံလုံခွုံခွုံဝတျ​​နပေီး မိနျးက​လေး​တှကေ ရှိသမြှအကုနျ​​ဖျော​ပွီးမကျြ​စိအဟာရ ​ကြှေးတဲ့​ခတျေ​​
အခွားနိုငျ​ငံက မငျးသား ၊ အဆို​တျော​လာရငျ​ မိနျးက​လေး​တှကေထိပျ​ဆုံးကသှားပီး သဲသဲလှူပျ ငမျးငမျးတကျ​ဖွဈ​​နပေီး
​ယောကျြား​လေး​တှကေ ကမ္ဘ်ာဘကြျော​အမြိုးသမီးလာတာ​တောငျ​မသိသလို​အေး​ဆေး​နတေဲ့ ကြုပျ​တို့မွနျ​မာနိူငျ​ငံ​ခတျေ​
(မဟုတျ​ဘူးမငွငျးနဲ့ EXO အဖှဲ့လာတုနျးက ​လဆေိပျ​မှာ​သောကျ​ရှကျ​မရှိ အုံလိုကျ​ကငျြးလိုကျ​ သှားငိုပွတဲ့ မိနျးက​လေးထုကွီးနဲ့ ကမာ ကြျော​ DJ Soda လာတာ​တောငျ​ ဘာအသံမှမထှကျ​တဲ့​ယောကျြား​လေး​​တှေ အဖွဈ​ကိုကွညျ့​သိသာတယျ​)
​ခတျေ​နဲ့အညီ​နတော မ​ပွောလို​ပမေယျ့​ ​ဟော့လှနျးလာရငျ​မ​ကောငျးပါဘူး
ဒီလိုပိုဈ့​ကို​ရေးရလို့ ” သူတို့ပစ်စညျးနဲ့သူတို့​ဖျော​တာ မငျးနဲ့ဘာဆိုငျ​သလဲ..?” ​မေးမညျ့​သူမြားအတှကျ​ တဈ​ခါထဲ​ဖွေ​ပေးမယျ​….
ဒါဟာ မွနျ​မာပွညျ​….ကြ​နျောကမွနျ​မာနိူငျ​ငံသား…ကြ​နျော့​ နိူငျ​ငံကြ​နျော့​ယဉျ​​ကြေးမှူ့အတှကျ ​​ကြ​နျော​​ပွောဆို​ဝဖေနျ​ခှငျ့​ရှိတယျ​……
​သခြောတယျ​….ကြ​နျော​တို့မွနျ​မာပွညျ​ရဲ့ ယဉျ​​ကြေးမှူ့ဟာအဲ့လိုမိနျးက​လေး​တှေ​ကွောငျ့​ ​နောကျ​ဆယျ​စုနှဈ​တဈ​ခုစာဆိုရငျ​ယဉျ​​ကြေးမှူ့ဟာ လကျ​ခြိုး​ရလေို့ရ​နေ​လောကျ​ပီ…..
မိနျးက​လေး​တှကေို ​ပွောခငျြ​တာက​တော့ ကိုယျ့​​ရဲ့အ​နအေထိုငျအပွုအမူအ​ကွောငျ့​ အိမျ​ကမိဘ….မွနျ​မာပွညျ​ရဲ့ယဉျ​​ကြေးမှူ
Previous Article အချိန်တန်ရင် ခေါ်အိပ်လိုက် ပြီးရင်ပြန်လွှတ်လိုက်နဲ့ တချို့မိန်းကလေးတွေဆို ဂျုံးဂျုံးကျနေရှာပြီ
Next Article အခမဲ့ပြည့်တန်ဆာရုံ ဖြစ်လာတဲ့မြန်မာပြည်မှ တစ်ချို့သော မိန်းကလေးများ အကြောင်း